Shiinaha Warshadaha iyo Warshadaha Soosaarka Caagga Grand Luminous
Caaga-dhagaxa ah ee loo yaqaan 'paninescent pebbles' bir-bir leh alwaaxa-dhagaxa leh waa dhagax dhalaalaya oo dadku sameeyay, oo ku saleysan midabka Photoluminescent iyo resin synthetic gaar ah. Marka loo soo bandhigo ilaha iftiinka, midabka loo yaqaan 'photoluminescent colors' ee iftiinka cobblestone wuxuu noqdaa mid faraxsan oo dhalaalaya mugdi isagoo markii hore aad u xoog badan, ka dibna si tartiib tartiib ah habeenimadii ugu yaraanaya. Iftiiminta waxaa ugu wanaagsan oo lagu arkaa aag mugdi ah, oo ay ka jiraan ilaha iftiinka amba sida iftiinka jidadka iyo iftiinka dayaxa. Tilmaamo Ku soo ifbaxa mugdiga & is-...
Xawaaraha ka samaysan caarada
Dhuxul dhagaxa ah ee bulukeetiga leh waa dhagax bir dhalaalaya oo dadku sameeyay, oo ku saleysan midabka Photoluminescent iyo resin synthetic gaar ah. Marka loo soo bandhigo ilaha iftiinka, midabka loo yaqaan 'photoluminescent colors' ee iftiinka cobblestone wuxuu noqdaa mid faraxsan oo dhalaalaya mugdi isagoo markii hore aad u xoog badan, ka dibna si tartiib tartiib ah habeenimadii ugu yaraanaya. Iftiiminta waxaa ugu wanaagsan oo lagu arkaa aag mugdi ah, oo ay ka jiraan ilaha iftiinka amba sida iftiinka jidadka iyo iftiinka dayaxa.
Astaamaha Ku soo ifbaxa mugdiga & is-iftiinka mugdigaMidabbo kala duwan oo dhalaalaya: midab hurdi-cagaaran, buluug-cagaaran iyo cir-buluug ah iwm.Maalintii layaabka lahayd ee midab cad, jaale, cagaar, buluug, casaan iwm.Waqti dheer kadib iftiinka dheer: in ka badan 8 saac
magac buuxa caaga buluuga ah ee kuxiran dhagaxa madow
Codsi Qurxinta Gaandi, qurxinta wadada, qurxinta dukaanada dharkaRockery, ubaxa ubaxa, muuqaalka dhulka,Aquarium, fishbowl, qurxinta weelka kalluunkaDabaqa barkad, barkad qurxin, qurxinta xardho iwm.
Cabbirka caanka ah Cabbirka la heli karo
Maalintii midab maalinta cagaar khafiif ah, casaan, jaalle, buluug iwm.
iftiin mcd / m3
Waqtiga kadib in kabadan 3000mintes
Xidhmada: Boorso leh boorso banaanka ah: 15kg / kartoon: 24 * 30 * 36cm.
Hore: Photoluminescent Masterbatch
Xiga: Laydhka xargaha glaze ee nidaamka baxsiga degdegga ah